Mc Courts Cottage, Morne Mountains
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnnette
***Indawo yokuhlala eqinisekisiweyo yabakhenkethi***
Ngaphandle komzila obethwayo .... Indlu yangasese yaseMc Courts isekwe kwiLizwe eliMhle lase-Hilltown (iGateway to the Mournes) Yayakhiwe ekuqaleni kwiminyaka engama-200 eyadlulayo yaze yahlaziywa kakuhle ukuze iphile kule mihla. Yonwabela ukuzola kunye nemibono emangalisayo kule cottage intle. Le ndawo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla.
*** I-Hot-Tub ibandakanyiwe *** I-WIFI ibandakanyiwe ***
*** Nceda ufunde iinkcukacha ezigcweleyo zoluhlu ***
Qhuba ezantsi indlela ende enamatye yabucala ukuze ufumane le gem ifihliweyo kwaye uphumle kwindawo ebanzi kunye nokuzola.
Ihlaziywe mva nje kwaye ngokuhambelana nomtsalane wayo wendabuko wase-Ireland, ikwanomxube wokuchukunyiswa kwangoku ezisa zombini ezintsha kunye ezindala kunye.
Khululeka kwi-tub eshushu okanye upholile phambi kwesitovu ukwenza ukuhlala kwakho kubaluleke ngakumbi.
ICottage yeeNkundla zaseMc ibekwe emaphandleni ase-Hilltown kwaye iziva iyimfihlo kuyo. Ukujonga ngaphandle kwendlwana yeyona mbono inomtsalane ngaphezulu kwesixeko saseNewry kunye neendawo ezingqongileyo, unokubona iimayile kunye neemayile!
Igumbi lokulala elinye lineplani evulekileyo ngaphezulu kwendawo yokuhlala enebhedi yobukhulu benkosi, igumbi lokulala ezimbini linebhedi enkulu kunye negumbi lokulala lesithathu linemigangatho emibini.
Umgangatho osezantsi ligumbi lokuhlala elinendawo yomlilo enkulu enezitovu zokhuni (iipakethe yokuqalisa ibonelelwe), ikhitshi ligcwele indawo yokupheka enkulu, igumbi eliluncedo elinendawo yokugcina eyongezelelweyo kunye negumbi lokuhlambela elihle elinebhafu kunye neshawari.
Kukho iisilingi ezisezantsi kumagumbi aphezulu.
Ibhedi yokuhamba, njl.njl. ziyafumaneka xa ziceliwe.
# Igcwaliswe ngokutsha kwaye ifudunyezwe kulo lonke ubhukisho !!
# Nceda ucele i-Hot Tub kumyalezo wakho wokubhukisha, kungenjalo awuyi kulungiselelwa ukuhlala kwakho.
# Andikwazi ukulungiselela ibhafu eshushu EMVA kokungena.
# Iindwendwe kufuneka zivumelane / zithobele imithetho yokhuseleko xa usebenzisa iHot-Tub.
***Amaqela amakhulu, kutheni ungabhuki iBarn nayo! Nceda ujonge olunye uluhlu lwam olubandakanya zombini iipropathi ***
Yakhiwa ekuqaleni kwiminyaka engama-200 eyadlulayo, usapho lweCourt yakwaMc yayilusapho lokugqibela ukuhlala apha, ke besisoloko sisazi “njengeeNkundla zikaMc”.
I-Mc Courts Cottage imalunga neekhilomitha ezi-2 ukusuka kumbindi welali yase-Hilltown, ukanti uziva ngathi iimayile zakho kude naphi na!
Ukujonga isixeko saseNewry ukusuka kude kunye neenduli ezintle eziqengqelekayo zamaphandle aseMorne. Le ndawo ifanelekile kwabo banomdla wokuHamba, abaBhayisiki, abakhweli bebhayisekile eNtabeni, abafoti abasakhasayo kunye nabo banqwenela ukubaleka kuyo yonke into.
Western Style ukukhwela ihashe umva iyafumaneka apha Hilltown @ Laneway Lodge.
INewry yimizuzu engama-20 yokuqhuba, njengoko kunjalo ngeCastlewellan. Idolophu entle yolwandle yaseNewcastle yimizuzu engama-30 yokuqhuba. IWarrenpoint kunye neRostrevor zimalunga ne-15 mins drive, ke siyindawo esembindini kwiidolophu / iindawo ezinomtsalane.
Ii-Para-gliders ziyathanda ukusebenzisa le ndawo unyaka wonke, ke ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo unokuzibukela ukwigadi engaphambili, ngumbono omangalisayo ngenene.
Siyabamkela abantwana nangona nceda uqaphele ukuba i-cottage ayizange ingqinwe ngabantwana kwaye luxanduva lwabazali ukuqinisekisa ukuba abantwana babo bakhuselekile kangangoko ngaphakathi nangaphandle.
Ibekwe kwindawo efihlakeleyo yasemaphandleni, uya kuba noxolo kunye nokuzola apha ujikelezwe ngamabala kunye nemibono emangalisayo.
I’m a busy mum of 5 and love being an Airbnb host!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hilltown